Soomaaliya oo diiday qorshaha AMISOM loogu beddelayo howlgal QM iyo Midowga Afrika ah – WARSOOR
Soomaaliya oo diiday qorshaha AMISOM loogu beddelayo howlgal QM iyo Midowga Afrika ah
MUQDISHO — (WARSOOR) – Dawladda Soomaaliya ayaa mar kale ku celisay inay kasoo horjeeddo in hawlgalka AMISOM loo bedelo mid nabad ilaalin oo ay wadajir uga hawlgalaan Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay.
War-saxaafeed ay daabacday Wasaaradda Difaaca Soomaaliya, balse kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibedda, ayaa lagu sheegay in dawladda Soomaaliya ay si xooggan u diiddan tahay qorshaha uu ku talinayo hawlgalka wadajirka ah ee Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay.
Maalintii shalay ayaa Golaha Ammaanka iyo Nabadda ee Midowga Afrika uu sheegay inuu taageersan yahay qorshaha ku saabsan hawlgalka wadajirka ah.
Qorshahaas waxaa markiisii hore soo jeediyey guddi qiimayn ah oo Midowga Afrika usoo diray Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya waxay horey u diidday qorshahaas bishii July ee sannadkan.
Qorshan ayaa hadii uu dhaqan galayo waxaa laga doonayaa inay ansixiyaan Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, ayna aqbasho dawladda Soomaaliya.
Dawladda Soomaaliya ayaa doonaysa in hawlgalka AMISOM looga gudbo ciidamada AMISOM si tartiib-tartiib ah mas’uuliyadda amniga dalka loogu wareejiyo ciidamada Soomaalida.
Germany: Masaajidada Cologne oo Aadaanka ku baahin doona sameecado dibadda ah
Maxkamadda ICJ oo Soomaaliya u xukuntay inta badan dhul badeedkii ay isku hayeen Kenya